सरकारलाई खुल्ला रुपमा जनताले च्या’लेन्ज गरौं नत्र पुनः लोडसेडिङ व्य’होर्नुपर्ने हुन्छ :त्रिपाठी – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सरकारलाई खुल्ला रुपमा जनताले च्या’लेन्ज गरौं नत्र पुनः लोडसेडिङ व्य’होर्नुपर्ने हुन्छ :त्रिपाठी
लामो समयदेखि सञ्चार क्षेत्रमा योगदान दिदै आएका वरिष्ठ पत्र’कार विनोद त्रीपाठले कुलमानको पक्षमा बोलेका छन् । उनिले बोल्दै पनि आएका हुन् । त्रिपाठी भन्छन् “अब सबैले सका’रात्मक तवरले आन्दोलन गर्यौं भने मात्र हामिले चाहेका व्यक्ति पुनः आउँ’लान नत्र सरकारले र’णनीति रच्ने छ ।”त्रिपाठी अनेकौं बेथि’तिहरुको बिरुद्वमा खु’लेर संन्जालहरुमा लेखी सबैलाई स’जग बनाउँदै आएका छन् । उनी लामो समयदेखी पत्र’कारीतामा आबद्ध रहदै आएका हुन् । उनीले बारम्बार कुलमानको पक्ष’मा खुलेर बोलेका छन् । उनी आफ्नो सामा’जिक संजाल फेस्बुकमा लेख्छ:”विगतदेखि नै मैले तपा’ईंहरुलाई सही सुचना दिने प्रयास गरिरहेको छु । सकभर आधिकारिक होस भन्नेमा सचेत छु । मन्त्रिपरिषद बैठ’क सकिएको छ । अघि बैठक बसिरहँदा मैले जा’नकारी गराएको थिएं, कु’लमान घिसि’ङको प्रस्ताव आज पनि पेश भएन भन्ने कुरा ।आखिर, त्यहि भ’यो, जुन कुरा अघि मलाई विश्वासिलो स्रोतले जानकारी दिएको थियो । स्रो’तका अनुसार, केहि दिन नेपाल बिद्युत प्रा’धिकरणलाई नि’मित्त कार्यकारी निर्देशकको भरमा चलाईने जानकारी प्राप्त भएको छ।
कुलमानलाई नयाँ नि’युक्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लगाएर सरकारले दुख दिने नियत देखियो । कुलमानको चार बर्षको ठुलो मिहिनेत र लगनशीलतालाई मिथ्या सावित गर्न ठुलो खेल चलिरहेको छ । आ’उने दिनहरुमा यस्का परि’णाम तपाईं हा’मीले देख्नेछौं ।अब सर’कारले, देशभरबाट आन्दोलनको आह्वान गरेको छ । यो एक प्रकारको सरकारी आत्मघाती आन्दोलन हुनेछ । फेसवुक, ट्वीटर, मिडि’या, अन्य सा’माजिक सं’जाल, सड’कहरु, चोकचोक, घरघर, चौर, मैदान आदि जहाँ जहाँ जस्ले जे जे सकिन्छ।त्यहि अनुसारका आ’न्दोलन गरेर सरकारलाई पुरै दवाब दिनुपर्ने स्वंय सरकारले माग गरेको छ । अब, फैसला जनताको मात्र हातमा छ । नत्र, कात्तिक १ गतेदेखि नेपालले फेरि लो’डसेडिङ व्य’होर्नुपर्नेछ ।
“कुलमान घिसिङलाई वि’द्युत प्राधिक’रणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्ति गरिएन भने , बुझे हुन्छ , यही कारणले सरकार ढल्छ । राम्रो काम गर, सफल मा’न्छेलाई जिम्मेवारी देउ भनेर सरकारलाई जन’ताले भन्नुपर्ने यो जस्तो ला’जमर्दो संसा’रमा क’हिं होला ! देशको उन्नति प्रगतिका लागि यस्तो चौ’पट दवा’व दिनुपर्ने हाम्रो देशका नागरिक कति दुर्भाग्यमा बांचिरहेका रहेछ्न , प्र’माणित भएन र ?”
यो पनि पूरा पढ्नुहोस :यसकारण कुलमानकै निरन्तरता चाहिन्छ: ‘जि’त्नेहरू फरक काम गर्दैनन्, उनीहरू फरक तरिकाले काम गर्छन् ।’ –शिव खेरा (भारतीय लेखक)खेराले लेखेका दर्जनौँ पुस्तकहरू मध्ये १९९८ मा प्रकाशित ‘यु क्यान वीन’ ले भारतमा विकासको सुत्र उत्पादन गरिदियो । उनको सोच र परिवर्तनको मो’डललाई भा’रतीय जनता पार्टीले विकासको एक अवधारणामा रूपान्तरण गर्ने कोशिस ग’र्‍यो । खे’राद्वारा लिखित समाज सुधारका पुस्तकहरू भारतमा प्रेरणाका स्रोत मानिन्छन् ।
मुलुक नि’र्माणमा राज’नीतिक परिव’र्तनमात्र महत्वको होइन । महत्व त समाज परिवर्तनको छ, जो अनिवार्य छ । नेतृत्व गर्नेहरूमा स’मायानुकूल परि’वर्तन आवश्यक छ । जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिमा सम’यानुकूल सोच चा’हिन्छ ।नेपाल विद्युत प्राधि’करणमा कु’लमान घिसिङले कुनै नयाँ काम गरेका होइनन् । खेराले भने झैँ उनले फ’रक ढङ्गले काम गरेका हुन् । उन’को फर’क ढङ्गको कामले नेपाल विद्युत प्रा’धिकरणलाई सर्व’साधारण जनताको विश्वासतिर डोर्‍याएको छ तत्का’लीन सरकारले कु’लमानलाई २०७३ साल भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक प’दमा नियुक्त गरेको थियो । प’हिलो वर्षमै प्रा’धिकरण डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफामा गयो । दोस्रो वर्ष ३ अर्ब, ते’स्रो वर्ष साढे ७ अर्ब र अहिले यो चौथो वर्ष ११ अर्ब नाफामा पुगिसकेको छ । कुलमान आउनुअघि ०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड घाटा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिक’रणको अभिले’खमा पाइन्छ ।
प्राधिकरणले ए’कातिर ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोरिरहेको थियो भने अर्कोतिर जनता चरम लोडसेडिङको मारमा थिए । हरेक घर अग्रज पुस्ताले भोगेका टु’कीको उ’ज्यालोतिर फर्किन थाले’का थिए । विपन्न परिवारले बिजुलीको उज्यालो आस मारिस’केका थिए । ला’लटिन, टु’की, मैनबत्ती, सोलार चार्जरजस्ता वैकल्पिक स्रोत सहारा बनेका थिए । आर्थिकरूपमा बलि’या परिवारले इन्भटर जस्ता साधन जोडेका थिए ।
यहि जर्जर र कठिन घडीमा कुल’मान विद्युत प्रा’धिकरणमा नियुक्ति भएका थिए । लोडसेडिङ हटाउने उनको अभिया’नमा अ’नेक तगा’राहरू तेर्सिएका थिए ।प्राधिकर’णको प्रगति विवरण हेर्ने हो भने पछिल्लो चार वर्षमा ९ हजारभन्दा ब’ढी ट्रान्स’फर्मरहरू थपिएका छन् । वितरण सब’स्टेशनमा १८२ प्रति’शत र प्रशा’रण लाइनका सबस्टेशनमा ८७ प्रतिशतको विद्युत क्षमता वृद्धि भएको छ । यसले अब लोडसेडिङ हुने सम्भावना शून्य बनाइदिएको छ।
नेपालमा राजनीति परिवर्तनले सरकारी अड्डाहरूभित्र पनि राजनीति घुसाइदियो । सरकारी अड्डाहरू कार्यकर्ता भर्तीका केन्द्र बने । २०४६ सालमा ब’हुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता त भयो, सँगै सरकारी निकाय दलहरूका अ’खडा बन्न पुगे । सरकारले सोझै नियुक्त गर्ने निकायहरू भागवण्डामा परे । जब गणतन्त्र आयो, तब दोहन झन् बढ्यो । सरकारी कामको विलम्ब संस्थागत भयो।
राजनीतिक वि’सङ्गतिका केही ति’क्तता खो’तलौँ । हाम्रो खराब राजनीतिले राज्यका हरेक अङ्गलाई कसरी निर्देशित गर्छ भन्ने हा’मीले भोगिसकेका छौँ । रा’जनीतिक हिसाबले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पा’र्टीको जन्म एकै समयमा भएको हो ।२००७ साल सेरोफेरोमा उत्पादन यी दलहरू पछिल्लो राजनी’तिक मैदानमा ब’लिया बन्दै गए । कां’ग्रेसको राणा शा’सन हटाउने जग र क’म्युनिष्टको प’ञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा यी दुवै दल सात दशक’देखि सँगै छन् । सत्ता’को बागडोर स’म्हाल्न दुवैलाई उति नै अव’सर प्राप्त भ’यो । तर, सुशासन र सुधारमा यी दुवै दल ब’राबर प्र’माणित भइसके । दु’वै दल’ले एकले अर्कोलाई दो’षारोपण गर्नुको कुनै अर्थ रहेन ।
न्यायालयदेखि शिक्षा’लयसम्म, सुर’क्षा अङ्गदेखि स्वास्थ्यका अड्डासम्म यिनै कम्युनिष्ट–कांग्रेसको रजगज चल्दै गयो । ठेकेदारका फाइलदेखि आयोगका आ’युक्तका कुर्सीसम्म भाग’बण्डाले राज्यका नि’यम कु’ल्चिँदै गयो । कानुनका दफाहरू मिचिए । प्र’णालीका गोरे’टाहरू मे’टिन थाले । विभाग, संस्थान, आयोग, अदालत, कार्यालयहरू राजनीतिक जाँ’तोमा पिसिँदै गए।
अन्ततः दलीय कोप’भाजनको शि’कारमा जनता पीडित बनेर बाँच्न विवश भए । पछिल्ला दि’नहरूमा सडकदेखि सामाजिक सञ्जा’लसम्म र मिडिया’का स्थानदेखि अभियानका पाइलाहरूमा यी दुई ठूला दलप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गयो । अझै पनि यी दलहरूले आफ्नो रासायनिक अवगुण सु’धार गर्ने कुनै सं’केत देखाएका छैनन्।
यी सबै निराशाका बीच लामो समय दै’निक १६ घण्टासमम लोडसेडिङको मार खे’पेका ने’पालीले अहिले बिजुलीको सुविधा पाएका छन् । नेपालको वि’द्युत उत्पादन जलसँग सम्बन्धित छ । विश्वमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने देश निकै कम छन् । न्युक्लिर्यसका प्रणा’लीमार्फत आ’णविक विद्युत उत्पादनबाट विकसित मुलु’कहरू उज्या’लो बनेका छन् ।नेपालले आफ्नो साधनस्रोतका आ’धारमा जलविद्युतलाई नै निरन्तरता दिएको छ । यी जलविद्युत आयोजनाहरू सर्वसाधारणका लगा’नी र वैदेशिक सहयोग’बाट सञ्चालित छन् । सबै आयोजनाहरूबाट उत्पा’दित बिजुली वितरणको जिम्मेवारी नेपाल वि’द्युत प्राधिकरणमा छ ।
फेरि कुलमानतर्फ फर्कों । २०७३ सा’लको तिहार नजिकिँदै थियो । चाड’पर्वको मा’हौलले हरेक ना’गरिकका मनहरू चङ्गा थिए । त्यो समय दैनिक १४ घण्टा लो’डसेडिङ चलि’रहेको थियो । कुलमानले ति’हार आउनु के’ही दिन अघि भनिदिए- तिहारमा लोडसेडिङ हुँदैन ।उनको यो भनाइ धेरैले प’त्याएनन् । अन्य समयको तुलनामा तिहारमा बढी विद्युत खपत हुन्छ । प्रा’धिकरणको अनुमानमा १४ सय मेगा’वाट ख’पत हुने थियो त्यो ति’हारमा । कुलमानले आफ्नो वाचा पूरा गरेरै छाडे ।
त्यो वर्षको ति’हारको रमझममा उज्यालोको झिलिमिली बन्द भएन । साँच्चै कुलमानले भने झैँ त्यो तिहा’र झल’मल भयो । पछि, देशका हरेक क्षेत्रलाई खण्ड–ख’ण्डमा वि’भाजन गरेर उनले त्यो वर्षको अन्त्यस’म्ममा देशभरि नै लोडसेडिङ हटाइदिए । यो एक प्रकारको वि’द्युत क्रा’न्ति नै थियो ।कुलमा’नसँग असह’मत हुनेहरू भ’न्छन्– भारतबाट आयात गरेको र स्वदेशमै विद्युत उत्पा’दनमा बढे’का का’रण लोडसेडिङ हटे’को हो, यसमा कुल’मानको कुनै भूमिका छैन।
यसो भन्नेहरूको मन जल’नतर्फ केन्द्रित छ । कुलमानले गरेको कामले अफ’वाहहरू गल’त सावित भए । कुलमान आएपछि पहिलो का’म विद्युत चुहा’वट नियन्त्रणमा के’न्द्रित भन्यो । चि’तवन, भक्तपुर लगा’यतका केही जिल्लामा अत्यधिक विद्युत चुहावट थियो ।अव्य’वस्थित ट्रा’न्समिटरहरू, भ’द्रगोल तार, कमजोर अनुगमन आदिले विद्युत चुहा’वट अत्यधिक थियो । प्राधिकरणको रेक’र्डअनुसार, ०७३ सालमा २५ दशमलव ८७ प्रतिशत विद्युत चुहावट थियो । यो चु’हावट रोक्न कु’लमान दिनरात आफैँ फिल्डमा नि’स्के । उनको सक्रियता सञ्चारमाध्यमका प्रा’थमिकता प’र्‍यो ।वर्तमान सर’कारी अ’खडाका प्रमुखहरू मध्येबाट मूल्यांकन गर्दा कुलमान प्रथ’म भइस’केका छन् । जनताको आ’वाज पनि अहिले कुलमानकै निरन्त’रताका लागि बो’लिरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणमा थप संस्थागत सुधारका लागि अर्को चा’र वर्ष कुलमा’नको आवश्य’कता छ । अब सधैँभरि स्थायी उज्यालो बनाउन जलमाफियाको चलखेल रोक्न यो अर्को विकल्प छैन ।चार वर्ष पूरा हुन ला’ग्दा विद्युत चु’हावट १५ दशमलव २७ प्रतिशतमा सि’मित भएको छ । कुलमा’नको यो ठू’लो उपलब्धि हो ।
कुलमानले अर्को नयाँ सुरु’वात कर्मचा’री सरुवा’मा गरे । नेपालका सरकारी अड्डामा कर्म’चारीले गर्ने ढिलासुस्ति उनलाई राम्ररी थाहा थियो । उनले प्रा’धिकरणको सु’धारका लागि कर्मचारीको फेरबदल आवश्यक ठाने । ०७३ सालको माघमा उनले २ ह’जार ५ सय कर्म’चारी अ’दलबदल पारे । यसले उनलाई काम गर्न स’हज बना’इदियो ।कर्मचारी सरुवामा उनले राजनीतिक दबाब निकै झेल्नु पर्‍यो । उनलाई जनताको पूरा साथ थियो । दलहरूको स्वार्थपूर्ण दबा’बमथि जन’ताले ख’बरदारी ग’र्दै गए । यसले कुलमानलाई काममा अघि बढ्न हौसला दियो ।प्राधिकरणको प्रगति वि’वरण हेर्ने हो भ’ने पछिल्लो चार वर्षमा ९ हजारभ’न्दा बढी ट्रान्सफ’र्मरहरू थपि’एका छन् । वितरण सबस्टेशनमा १८२ प्रति’शत र प्रशारण लाइनका सबस्टेशनमा ८७ प्रतिशतको विद्युत क्ष’मता वृ’द्धि भएको छ । यसले अब लोडसेडिङ हुने सम्भावना शू’न्य बनाइदिएको छ।
हरेक वर्ष विद्यु’त ख’प’त बढेको छ । घर सं’ख्या र उद्योगका परिधिहरू बढिरहेका छन् । चार वर्षमा १३ लाखभन्दा बढी ग्राहक थपिएका छन् । यसला’ई व्यवस्था’पन गर्न कुल’मानले २० वर्षसम्म कुनै लोडसेडिङ नहुने अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।अहिले भारतबाट हुने विद्युत आ’यात घ’टाएको प्राधि’क’रणले जनाएको छ । अहिले भा’रतबाट कु’ल खप’तको २२ प्रतिशत’मात्र बिजुली आ’उँछ । गत वर्ष ३५ प्रतिशत थियो । प्राधिकरणको विव’रणअनुसार हाल बि’जुली खप’त (०७६/७७) ७ अर्ब युनिट छ । यो वर्ष सकिने योजनामा रहेको माथिल्लो तामा’कोशी ज’लविद्युत आ’योजनाबाट उत्पादन हुने ४५६ मेगावाटले भा’रतसँगको आं’शिक निरर्भरता पूरै अ’न्त्य गरिदिनेछ ।यो आयोज’नाबाट उत्पादन हुने बिजुली हाल भारतबाट आयात गरिए’भन्दा बढी हो । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने भने कु’लमानले ल्याए’को यो’जना चार वर्षमा शतप्रतिशत पूरा हुने देखिएको छ । अब नेपाल बिजु’लीमा पूर्ण रूपले आ’त्मनिर्भर बन्न ला’गेको छ ।
मुलुक निर्माणमा कुनै एक व्यक्तिको म’हत्वकांक्षामा जनताको साथ आ’वश्यक पर्छ । प्रग’ति गर्न कुनै नयाँ काम गर्न पर्दैन । फरक ढङ्गले काम गर्ने सृजनात्मक क्षमता चाहिन्छ । भारतीय लेख’क शिव खेराले भने झैँ फरक तरि’काले काम गर्दा रा’म्रो परि’णाम दिन्छ भने किन त्यसो नगर्ने ? हो कुल’मानले पनि त्यही गरे, जुन तरिकाले प्राधिकरणको प्रग’तिमा साधक बन्यो ।नेपालमा राजनीतिक पदमा धेरै पटक एउटै व्यक्ति दो’होरिएका छन् । सर’कारी नि’युक्तिहरूमा एकपछि अर्को एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने गरेको छ त’र तिनले देश र जनताको पक्षमा काम गरे वा गरेनन् भन्ने कुरा अझै समिक्षा हुन बाँकी छ ।
कुलमानको परीक्षाको परि’णाम आइसकेको छ । उनले जनताको पक्षमा का’म गरेर स’र्वोत्कृष्ट अंक ल्याइसकेका छन् । हामी फेल भएका व्यक्ति’लाई दोहोर्‍या’एर महत्वपूर्ण पदमा पुर्‍याउँछौं भने प्रथ’म भएका कु’लमा’नलाई कि’न नदोहोर्‍याउने?वर्तमान सरकारी अख’डाका प्रमुख’हरू मध्येबाट मूल्यांकन गर्दा कुल’मान प्रथम भइ’सकेका छन् । ज’नताको आवाज पनि अहिले कु’लमानकै निरन्तरता’का लागि बोलिरहेको छ । विद्युत प्राधि’करणमा थप संस्थाग’त सुधा_रका लागि अ’र्को चार वर्ष कुलमानको आ”वश्यकता छ । अब सधैँभरि स्थायी उज्यालो बनाउन ज’लमाफि’याको च’लखेल रो’क्न यो अर्को वि’कल्प छैन।
Previous सफल काम गर्दा पनि किन ओली सरकारको आँखामा पर्दैनन कुलमान घिसिङ ?-कासी जेट्ली
Next कम्युनि,स्ट शा,सन अ,न्त्य गरौ, मनपरित-न्त्र भयो ,देश बचाउँ – ✍️गंगा सुबेदी,पुरा पढी शेयर गरौं❣️